I-Ibidun Ajayi Ighodalo Dead + Okungakumbi-Iindaba zaseNigeria kunye neeNdaba zeHlabathi
NgeMivulo yengqondo: Njani Indlela yabaNtu abaThuke ngayo abaNtu abaDala
FI-ormer yobuhle bukumkanikazi, u-Ibidun Ajayi Ighodalo usweleke, inkundla ePhakamileyo yase-US ixhasa ukukhuselwa kwe-LGBTQ +, uMarcus Rashford ucela urhulumente ukuba arhoxise isigqibo sesicwangciso sokutya. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. ENigeria: Owayengumkanikazi wobuhle, uIbidun Ajayi Ighodalo, usweleke sisifo sentliziyo
Umfundisi Ighodalo kunye no-Ibidun Ighodalo ongasekhoyo
Usapho lukaMfundisi Ituah Ighodalo Inkonzo ye-Utatu House iye yenziwa isijwili emva kokusweleka kwenkosikazi yayo, Ibidun Ighodalo. Umcwangcisi womsitho wobugcisa usweleke ngentseni yangeCawa, nge-14 kaJuni kwihotele ePort Harcourt kwisifo sentliziyo esirhanelwayo. Ibidun Ajayi Ibidunni Ighodalo
Umthombo osondele kulusapho utyhile kwimithombo yeendaba ukuba u-Ibidun Ighodalo nee Ajayi ophumeleleyo, ophumelele iphepha lobuhle buka-Miss Lux kwiminyaka engama-20 eyadlulayo kwaye wayengu-CEO ye-arhente yokucwangcisa ka-Elizabeth R, waya ePort Harcourt ngoLwesihlanu, nge-12 kaJuni esiya emsebenzini . Wayeneminyaka engama-39 kwaye wayezakuphawula usuku lokuzalwa kwakhe nge-40 ngeCawa, nge-19 kaJulayi. Ibidun Ighodalo ufile
Wayekwangumsunguli we-Ibidunni Ighodalo Foundation, umbutho ongajonganga nzuzo owenziwayo ukwazisa abantu ngemicimbi engacacisi inzala. Isiseko sikwabonelela ngezibonelelo ezizibini ezifuna unyango lokuchuma njengokuchumisa ngaphakathi-vitro (IVF) kunye nokungeniswa ngaphakathi kwe-intrauterine. Ibidunni Ighodalo
2. UMphathiswa wezeMpilo Kwaku Kwakuye -yeyeManu ephendula kunyango lwe-COVID-19 eGhana
UMphathiswa Wezempilo, uMnu Kwaku Agyeman Manu
UMphathiswa wezeMpilo, uMnu. Kwaku Agyeman-Manu, ukwamkelwa kwiYunivesithi yaseGhana Medical Center (UGMC), ukufumana unyango lwesifo se-coronavirus (COVID-19). U-Ibidun Ighodalo ufile u-Ibidun Ighalo
UMongameli, Nana Akufo-Addo, okuqinisekisile oku kuhlaziyo lwakhe lwe-11 kwiMigaqo ethathiwe ngokuchasene ne-COVID-19, utshilo umphathiswa oneminyaka engama-64 ubudala, nowamkelweyo ngoLwesibini odlulileyo. Ibidun Ajayi
3. UMzantsi Afrika: I-COSAS yokuvala zonke izikolo ukuba abafundi abavavanyelwa i-COVID-19
ICongress of South African Student (COSAS), ngoMvulo, nge-15 kaJuni, yasongela ngokuvalwa kwezikolo kwilizwe liphela ukuba abafundi abavavanyelwa i-COVID-19 ngaphambi kokuba babuyele kwigumbi lokufundela.
Kudliwanondlebe, Umququzeleli weSizwe weCOSAS UBuntu Josephs uthe kungenzeka ukuba bonke abafundi kuzo zonke izikolo kwilizwe liphela bavavanywe i-COVID-19. Uye wathi ukuba urhulumente angazithengela izixhobo zokuzikhusela (PPE) zazo zonke izikolo, kunokwenzeka ukuba babavavanye bonke abafundi. Ibidun Ajayi
4. INkundla ePhakamileyo yase-US iyayivumela ikrexe, ukhuseleko lwabasebenzi
Inkundla yagweba i-6 ukuya kwezintathu isithi umthetho wokudibana onqande ucalucalulo ngenxa yezesondo ugubungela abasebenzi abathandanayo
Inkundla ePhakamileyo igwebe ngoMvulo ukuba umthetho obalulekileyo wamalungelo oluntu ukhusela abantu be-LGBT kucalucalulo kwezomsebenzi, uloyiso oluzayo lwamalungelo e-LGBT kwinkundla yolondolozo. Ibidun Ighodalo ufile
Inkundla yagqiba ngevoti ye-6 ukuya kwe-3 yokuba umgaqo ophambili we-Civil rights Act ka-1964 owaziwa njengeSitetimenti VII esithi uvala ucalucalulo ngenxa yezesondo, phakathi kwezinye izizathu, ubambe umkhethe nxamnye nabasebenzi be-LGBT. Ibidun Ighalo
Isiphumo kulindeleke ukuba sibe nefuthe elibonakalayo kubasebenzi abaqikelelwa kwizigidi ezisibhozo ze-LGBT kwilizwe liphela kuba uninzi lwamazwe alubakhuseli kucalucalulo emsebenzini. I-8.1 yezigidi ze-LGBT yabantu abahlala e-US, ngokwe-Williams Institute kwisikolo somthetho i-UCLA. U-Ibidun Ighodalo ufile u-Ibidun Ajayi
Ityala lolokuqala inkundla ngamalungelo e-LGBT ukusukela ngezobulungisa U-Anthony Kennedy's umhlalaphantsi kunye nokutshintshwa ngu UBrett Kavanaugh. UKennedy yayililungelo lamalungelo ezitabane kunye nombhali wesigqibo somhlaba ngonyaka ka-2015 owenze umtshato wesini esifanayo nesemthethweni e-United States. I-Kavanaugh ihlala ithathwa njengolondolozo ngakumbi.
5. UMarcus Rashford ubongoza urhulumente ukuba andise ukutya kwesikolo simahla
Indoda yaseMan Utd's Rashford yathetha ngamadini kayina kwishishini lakhe lokuphelisa intlupheko yokutya
UMarcus Rashford icele urhulumente ukuba asibuyisele kwisigqibo sokunganikezeli iivawutsha zesidlo sasimahla ehlotyeni, esithi Le nkqubo ayakhelwanga ukuba iintsapho ezinje zam ziphumelele. "
IManchester United kunye neNgilane phambili ziye zaphakamisa malunga ne-20m yeedola ukubonelela izidlo ezizigidi ezintathu kubantu abasemngciphekweni ngelixa besebenza nobubele beFareShare UK ngexesha lokuvalwa kwe-coronavirus. Ibidun Ajayi
Iphulo lokundwendwela lithembele ukuzisa urhulumente ukuba angawongeli isikimu sevawutsha kwiholide zehlobo.
Uhlobo Rave Juni 15, 2020
Onke amaHlaziyo akutshanje njengoko iSyk ityhila iNqaku le-PS5 yakutshanje